Nhau - Hunhu hwePVC yekunze madziro akarembera bhodhi PVC
ekunze madziro akarembera mabhodhi anonyanya kukodzera kushongedzwa kwemukati nekunze masvingo, sheds, uye eaves. Yayo panyama uye makemikari zvivakwa ndeaya ePVC machira. Zviratidzo zvehunyanzvi zvinoratidza kuti GB / T88 Yayo panyama uye makemikari zvivakwa ndeaya ePVC machira. Zviratidzo zvehunyanzvi zvinoenderana zvinoreva GB / T8814-1998, QB / T2133-1995, Q / DAB.001-2003.
Chigadzirwa chimiro sumo
1. Kushongedza kwakanaka. Nekuda kwemapatani akasiyana sekutevedzera huni dzehuni pamusoro pemabhodhi akarembera, iwo mavara akasiyana, uye mitsara yakajeka uye yakajeka. Iine pfungwa yemazuva ano yemaitiro akakurumbira eEuropean neAmerica. Inonyanya kukoshesa dzimba dzekugara, mafurati nezvivakwa zvekare.
2. Yakawanda nzira yekushandisa Ichi chigadzirwa chinoshingirira kutonhora kwakanyanya uye kupisa, kusimba, anti-ultraviolet uye anti-kukwegura. Iyo corrosion kuramba kweasidhi, alkali, munyu uye inopesana chikamu chakanyanya kunaka. Nyore kuchenesa (inogona kushambidzwa nemvura pfapfaidzo), yekuchengetedza-isina
3. Kuita moto kwakanaka. Ichi chigadzirwa chine okisijeni indekisi yemakumi mana, murazvo unodzora uye unozvidzimisa kure nemoto, uye unosangana neyenyika yekudzivirira moto mwero B1 (GB-T8627-99).
4. Simba guru rekuchengetedza. Izvo zviri nyore kwazvo kuisa polystyrene furo zvinhu pane yemukati mhete yebhodhi rakarembera, kuitira kuti iro remadziro ekunze kupisa kuchengetedza maitiro kuri nani. Iyo polystyrene furo zvinhu zvinoita sekuisa dura re "donje" pamba, nepo rwekunze madziro akarembera bhodhi iri "bhachi", imba inodziya munguva yechando.
5. Kuisa nyore, mutengo wakaderera, chimiro chemberi, nyore kuisa, yakasimba uye yakavimbika. Imba yemamirimita mazana maviri inogona kuiswa muzuva rimwe. Imba yekunze yakarembera bhodhi chirongwa ndiyo yekuchengetera kwevashandi uye yekuchengetedza-nguva yekunze madziro ekushongedza chirongwa kusvika ikozvino. Mukana wekukanganisa zvishoma, zvinongoda kutsiva ndiro nyowani yakaturika, iri nyore uye nekukurumidza, uye iri nyore kuitisa.
6. Yakareba yakajairwa sevhisi yehupenyu hupenyu ingangoita makore makumi maviri nemashanu, uye iyo mbiri-rukoko co-extrusion chigadzirwa chine pamusoro peiyo American GE (General Electric) chigadzirwa chigadzirwa ASA ine hupenyu hwebasa hweanopfuura makore makumi matatu.
7. Kuchengetedzwa kwakanaka kwezvakatipoteredza. Chigadzirwa hachikonzere kusvibisa nharaunda mune yekugadzira maitiro kana muinjiniya maitiro. Iyo yakanaka yekuchengetedza chengetedzo kushongedzwa pane kudzokorodza.
8. Yepamusoro nzwisisika kubatsirwa Kuisirwa kwekunze kwemadziro akarembera mabhodhi kunogona kupfupisa zvakanyanya nguva yekuvaka. Kunyanya mupurojekiti yekugadzirisa yeakare chivakwa chemberi, inogona kuvakwa zvakananga pasina kupedza iyo yekutanga facade, kubvisa kusvibiswa kwemadziro epakutanga kubva pakubviswa kwerusvingo rwekutanga, kudzikisa marara kubviswa, uye nekuchimbidza zvikuru Kufambira mberi kwekuvaka kwakapedzwa. . Nekuda kwekutsiviwa kwenguva yekuvaka uye kubvisa kubviswa kwemarara, mutengo weprojekiti wakaderedzwawo zvinobudirira.